Shiinaha silig silig silig ah soosaarka iyo Warshad | Jiashun
Maryaha dhalada ah ee loo yaqaan 'fiber fiber' ayaa loo isticmaalaa inay yihiin waxyaalaha aasaasiga ah, oo lagu dhejiyay silig bir birta ah oo aan lahayn. Qaar ka mid ah maro silig bir ah ayaa lagu dahaadhay daahan silikoon, daahan polyurethane, garaafka graphite, vermiculite daaro, iwm waxaa ka samaysan yahay maro fiber fiber dabka u adkaysta, xabagta heerkulka sare oo aan sun ahayn oo isku dhafan iyo budada titanium cadaadiska kulul.
Maryaha dhalada ah ee loo yaqaan 'fiber fiber' ayaa loo isticmaalaa inay yihiin waxyaalaha aasaasiga ah, oo lagu dhejiyay silig bir birta ah oo aan lahayn. Qaar ka mid ah maro silig bir ah ayaa lagu dahaadhay daahan silikoon, daahan polyurethane, garaafka graphite, vermiculite daaro, iwm waxaa ka samaysan yahay maro fiber fiber dabka u adkaysta, xabagta heerkulka sare oo aan sun ahayn oo isku dhafan iyo budada titanium cadaadiska kulul. Dahaadhan ayaa loogu talagalay inay xoojiso xoogga marada dabka ka caagan, taasoo ka dhigaysa mid u adkaysta dabka, u adkaysiga ilmada, u adkaysi u yeelashada dharka iyo daxalka u adkaysta Marka loo eego bay'ada adeegsiga kaladuwan, waxaad dooran kartaa maro silig bir ah oo la xoojiyay oo muraayad ah adigoon wax daahan ah lahayn, ama waxaad dooran kartaa marada siligga birta ah oo leh dahaadh, anzhidun-kan ayaa dabooli kara baahiyahaaga. Mashiinka siligga birta ah ee birta lagu xoojiyay Anzhidun wuxuu leeyahay astaamaha soo socda: caabbinta dabka wanaagsan iyo waxqabadka kuleylka kuleylka. Iska caabinta daxalka kiimikada ee wanaagsan, caabbinta saliidda iyo biyuhu. Iska caabinta gabowga, waxqabadka bannaanka ee wanaagsan, nolosha illaa 10 sano. Awood sare, daloolin u adkaysata, jeexjeexa ilmada. Daahitaan olol aad u fiican, olol celin. Ma jiro cuncun maqaar, ma jiro wax gacan ku taag ah.
Daaha qiiqa, daah dabka, bustaha dabka, buste alxanka, bustaha dabka, loox dabka, bacda dabka. Maqaarka iskuxirka ee dabacsan, iskuxirka balaarinta dabacsan iyo magdhawga. Mashiinka difaaca kuleylka, qalabka kuleylka kuleylka ee warshadaha foornada. Jaakada daboolka iyo suufka daboolka. Dahaarka xinjirowga gudaha iyo dibedda ee dahaarka dhuunta. Nidaamka kale ee ka hortagga dabka. Suunka gudbinta heerkulka sare
Shayga ayaa loo maray iyada oo loo marayo shahaado qaran oo tayo leh isla markaana si wanaagsan loogu soo dhoweeyay warshadeenna ugu weyn. Kooxdayada injineernimada khabiirku badanaa waxay diyaar u noqon doonaan inay kuugu adeegaan wadatashi iyo jawaab celin. Waxaan awoodnaa inaan sidoo kale kugu soo qaadno shaybaarro lacag la'aan ah si aan ula kulanno caddaymahaaga. Dadaallada ugu habboon ayaa laga yaabaa in la soo saaro si ay kuu siiyaan adeegga ugu faa'iidada badan iyo xalka. Haddii aad xiiseyneyso shirkadeena iyo xalka, fadlan nala soo xiriir annaga oo noo soo diraya emayl ama si toos ah noo soo wac. Inaad karti u leedahay inaad ogaato xalalkeena iyo shirkadeena. ar dheeraad ah, waxaad awoodi doontaa inaad timaado warshadeena si aad u aragto. Waxaan si joogto ah ugu soo dhawaynaynaa martidayada adduunka oo dhan shirkadeena. dhis ganacsi. nalalka. Fadlan si buuxda xorriyad u la hadal inaad nala hadasho abaabul ahaan. Waxaan aaminsanahay inaan la wadaagi doonno khibrada wax ku oolka ah ee ugu wanaagsan ganacsiga ganacsatadeena oo dhan.
Hore: Mashiinka Fluororubber
Xiga: Xiridda dabka